VACC1500 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကို တစ်နာရီတွင် ၁၅၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉ တရားဝင်လက်မှတ်ရရှိထားပါတယ်။
မော်ဒယ်- VACC 1500
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VACC1500
VACC1500 Purified water filtration system -aperfect choice for the bottled water manufacturers. With an hourly capacity of 1,500L/h, this product is suitable for the factories expecting to increase the productivity of the bottled water process.
VACC1500 ရေသန့်စစ်ထုတ်ကိရိယာက ရေသန့်ဘူး ထုတ်လုပ်သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နာရီမှာ ၁၅၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတာကြောင့် ထုတ်လုပ်မှု မြင့်မားစေပါတယ်။
VACC1500 will help you to quickly recover the capital. Contact us now if you are interested in our purified water filtration system. We arealeading company in importing and distributing filling machines, bottle blowing machines, water filtration lines, manufacturing stainless steel ice machines, etc. Our products all satisfy ISO 9001:2015 standard and are registered VA exclusive brands.
VACC1500 စက်က ငွေအရင်းမြန်မြန်ပြန်ရအောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီစက်ကို ဝယ်ယူချင်ရင် ကျွန်တော်တို့ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့က လောင်းဖြည့်ပေးသောစက်များ၊ ဘူးလေမှုတ်စက်များ၊ ရေစစ်ထုတ်လိုင်းများ၊ စတိန်းလက်စ်စတီးရေခဲစက်များကို ထုတ်လုပ်တင်ပို့ ဖြန့်ဖြူးတဲ့နေရာမှာ ဦးဆောင်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပစ္စည်းတွေ အားလုံးက ISO 9001:2015 စံချိန်မီပြီး VA ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်လက်မှတ်လည်း ရရှိထားပါတယ်။
We focus on quality to provide our customers with the best bottled water filtration line at the most competitive prices. With many branches in different cities and provinces nationwide, we are always willing to serve you.
ကျွန်တော်တို့က ဝယ်ယူသူတွေကို ဈေးနှုန်းချိုသာပြီး အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ ရေစစ်ထုတ်လိုင်းတွေကို ပေးဖို့ အမြဲ အလေးထားပါတယ်။ မြို့တွေ ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ ရုံးခွဲအများကြီးကနေ သင့်အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ အမြဲအသင့်ဖြစ်နေပါတယ်။
Withaspecific design of manual washing, the RO membrane will be regularly washed. This helps to prolong the shelf life of the machine and reducealot of expenses to buy the new RO membrane.
အသေးစိတ်တဲ့ ဆေးကြောတဲ့ စနစ်ကြောင့် RO အမြှေးပါးကို အချိန်မှန် ဆေးကြောရပါမယ်။ ဒါက စက်ကို ကြာရှည်ခံစေပြီး RO အလွှာပါးအသစ် ဝယ်ရတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေပါတယ်။
With this improved machine, the finished product has 100% purity level and is much sweeter than normal drinking water. Besides, the water is also supplemented with extra mineral salt which is extremely good for our health.
ဒီခေတ်မီတဲ့စက်နဲ့ ၁၀၀% သန့်ရှင်းစေပြီး သာမန်ထက် ရေကို ပိုချိုစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရေကို ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတဲ့ သတ္တုဆားနဲ့ ဖြည့်စွက်ပေးထားပါတယ်။
Qualified pure water
Reduce the TDS level (total amount of dissolved solids in water), ensuring that it is in the permitted threshold of less than 100mg/l. In addition, with high-quality stainless steel material and advanced design, this model brings stable performance with noise-reduction and long shelf life.
ရေထဲမှာပျော်ဝင်နေတဲ့ အရာဝတ္တုတွေကို လျှော့ချပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အရည်အသွေးမြင့် စတိန်းလက်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး ခေတ်မီတဲ့ ဒီဇိုင်းကြောင့် ဒီစက်က လုပ်ဆောင်မှုတည်ငြိမ်ပြီး ဆူညံမှုမရှိကာ ကြာရှည်လည်းခံပါတယ်။
What to do to install VACC1500 Purified water filtration system?
VACC1500 ရေသန့်စစ်ထုတ်စနစ်ကို တပ်ဆင်ဖို့ ဘာတွေလုပ်ရမလဲ?
To installaVACC1500 Purified water filtration system, please keep in mind below instructions:
VACC1500 ရေသန့်စစ်ထုတ်စနစ်ကို တပ်ဆင်ဖို့ အောက်က လမ်းညွှန်ချက်တွေကို လိုက်နာလုပ်ဆောင်ပါ။
+ Intake water
You should chooseaspecific water source such as well water, tap water, rainwater. Always ensure an adequate supply of source water for the operation process Otherwise, the system cannot ensure announced capacity.
တွင်းရေ၊ ဘုံပိုင်ရေ၊ မိုးရေတို့ကဲ့သို့သော ရေအရင်းအမြစ်မျိုးကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ လည်ပတ်ဖို့ ရေအလုံအလောက်ရှိတာ သေချာပါစေ။ အဲ့လိုမဟုတ်ရင် စနစ်က လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း မသေချာတော့ပါဘူး။
+ Business license registration
Typically, Typically, to getabusiness license for the production and distribution of bottled water, it takesaweek to 15 days.to getabusiness license for the production and distribution of bottled water. Viet An will guide customers on how to apply for the business license,
လုပ်ငန်းနှင့် ရေဘူးဖြန့်ချီရေးအတွက် လိုင်စင်ရဖို့က တစ်ပတ်ကနေ ၁၅ ရက်အထိ ကြာမြင့်ပါတယ်။ Viet An မှ ဝယ်ယူသူများကို လိုင်စင်ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ ပြောပြပေးသွားပါ့မယ်။
+ Area preparation
Area preparation here refers to raw area preparation without compartment in order to reinforce the topography of the installation area and prepare the necessary conditions for the construction and installation of the system.
ဧရိယာ ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာ အကန့်တွေမပါတဲ့ နေရာအကြမ်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှ တပ်ဆင်မယ့် ဧရိယာရဲ့ အသွင်အပြင်ကို ခိုင်ခန့်စေပြီး ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ တပ်ဆင်ရေးစနစ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အခြေအနေတွေ ပြင်ဆင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Prepare3phase power supply.
Prepare water intake and relevant external materials.
အဆင့် ၃ ခု ပါဝါအရင်းအမြစ်ကို ပြင်ဆင်ပါ။
ရေပမာဏနဲ့ သင့်တော်သော အခြားပစ္စည်းတွေကို ပြင်ဆင်ပါ။
+ Check and analyze the filtered water with the system
After installation, we need to check the filtered water quality through the RO membrane for analysis, Depending on each regulated area, the analysis will vary, ranging from 13-109 indicators. At the same time, prepare an area based on an actual implemented system to ensure operational performance as well as overall layout. Prepare to design logos and trademarks. Viet An supports the design of the stamps and brand logos and supports printing when needed.
ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာကို စနစ်နဲ့ စစ်ဆေးပြီး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါ
တပ်ဆင်ပြီးတဲ့အခါ RO အလွှာပါးကို ဖြတ်ပြီး ရေစစ်ထုတ်မှု အရည်အသွေးကို စစ်ဆေးပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဧရိယာပေါ်လိုက်ပြီး စစ်ဆေးမှုကလည်း ၁၃ မှ ၁၀၉ ကိရိယာဖြင့် စစ်ဆေးမှုက ကွဲပြားပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ လည်ပတ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ အပြင်အဆင်တစ်ခုလုံးကို သေချာစေဖို့ တကယ်ဆောင်ရွက်မယ့် စနစ်ပေါ်မူတည်ပြီး ဧရိယာကို ပြင်ဆင်ပါ။ လိုဂိုနဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ် ဒီဇိုင်းတွေ ပြင်ဆင်ပါ။ Viet An မှ တံဆိပ်ခေါင်း၊ လိုဂိုတွေနဲ့ ပရင့်တွေကို လိုအပ်လျှင် ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။
+ Register for food hygiene and safety
After having the results of water quality analysis, makearegistration dossier for food safety and hygiene certificate. Normally, it takes from 20-30 days to get the certificate. In addition, please prepare relevant documents such asaland map, system map and land map presentations. Viet An will also support you with this documentation.
အစားအသောက်ရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပြီး လုံခြုံစိတ်ချရမှု
ရေအရည်အသွေးကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး ရလဒ်ရှိလာတဲ့အခါ အစားအသောက်ရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပြီး လုံခြုံစိတ်ချရမှုအတွက် စာချုပ်စာတမ်းပြုလုပ်ပါ။ သာမာန်အားဖြင့် လက်မှတ်ရဖို့ ရက် ၂၀ ကနေ ၃၀ အထိ ကြာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြေပုံ၊ စနစ်မြေပုံ၊ မြေပုံတင်ပြချက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာချုပ်စာတမ်းတွေကိုလည်း ပြင်ဆင်ထားပါ။ Viet An မှ ဒီစာချုပ်စာတမ်းအတွက် သင့်ကို ကူညီပေးပါမယ်။
To ownapure water purification line withacapacity of 1500 liters per hour, 120 million dongs are required. In addition, it is necessary to invest inabottle filling machine withacapital amount of several million dongs andanumber of empty bottles with an expense of 50 to 100 million dongs. Labor cost, stamp cost, and other incurred cost might take around 1,000-2,000USD.
တစ်နာရီမှာ ၁၅၀၀ လီတာလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ရေစစ်ထုတ်လိုင်းကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ဗီယက်နမ်ငွေ သန်း ၁၂၀ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဗီယက်နမ်ငွေ သန်းပေါင်းများစွာကျသင့်မယ့် လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်၊ ဗီယက်နမ်ငွေ ၅၀-၁၀၀ လောက်ကျမယ့် ဘူးခွံများစွာ ရင်းနှီးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အလုပ်သမားစရိတ်၊ တံဆိပ်ခေါင်းစရိတ်၊ တခြားကုန်ကျစရိတ်တွေက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀-၂၀၀၀ ကြား ရှိပါတယ်။
If you want to openabottled water factory and buy genuine products of high-quality and competitive price, just come to our nearest branch for counseling.
တကယ်လို့ သင်က ရေသန့်ဘူးစက်ရုံဖွင့်ချင်ပြီး ဈေးသက်သာပြီး အရည်အသွေးမြင့်သော စစ်မှန်တဲ့ ပစ္စည်းကို လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖို့အတွက် နီးစပ်ရာ ရုံးခွဲကို ကြွလှမ်းလာခဲ့ပါ။
18 RO membrane RO အလွှာပါး4pc Hitech-USA/CSM Korea
27 20 Filter housing ၁၀ စစ်ထုတ်ကိရိယာအိမ်2pc VA/ USApec
Hỏi đáp & đánh giá VACC 1500 1500LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်